Olee otú Iji Mee A Train Adventure Ọbụna More mmefu ego-Enyi na Enyi | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Olee otú Iji Mee A Train Adventure Ọbụna More mmefu ego-Enyi na Enyi
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 24/10/2020)
Ejegharị ụgbọ okporo ígwè bụ ihe enchanting ahụmahụ na-enye ọtụtụ ụgwọ ọrụ. Gbọ oloko na-ewetara gị nso na odida obodo: ị gaghị ahụ igwe atụrụ na-ata nri ma ọ bụ na -eku ume n’ọkụ nke ala tulips site n’etiti oche nke ọdụ ụgbọ elu. Insgbọ oloko nwere ike ịgbanye gị na mpụga na debe gị n’etiti obodo n’oge adịghị anya. Nwere ike gbatịa ma zuru ike ma kparịta ụka site na a ala anya soro ndị njem ibe gị mgbe ị nọ n'ụgbọ okporo ígwè. Fọdụ ga-asị ụgbọ oloko njem bụ ya ụgwọ ọrụ n'ihi na oge ọ bụla anyị na-agba ụgbọ okporo ígwè, anyị na-enyere aka ịkwado ụlọ ọrụ dị mkpa na ọdịnala dị egwu. Ma taa, anyị bịara ịkọ maka ụdị ụgwọ ọrụ ọzọ - nke nwere ike inyere gị aka buru uzo ndi ozo na-ahụ ọbụna wider swath nke ụwa ma ọ bụ otú e si eme ka a ụgbọ okporo ígwè njem ọbụna ihe mmefu ego-enyi na enyi. Ha bụ ụdị ụgwọ ọrụ ndị ụlọ ọrụ kaadị akwụmụgwọ na-enye. Collectnakọta ha nwere ike ịbụ atụmatụ amamihe dị na ya maka ịkwado ezumike ị na-arọ nrọ.
1. Olee otú Iji Mee A Train Adventure Ọbụna More mmefu ego-Enyi na Enyi: Kaadị akwụmụgwọ njem dị iche
Ndị mmadụ na-edebe kaadị akwụmụgwọ ọdịnala na obere akpa ha maka ebumnuche abụọ. Mgbe ụfọdụ, anyị na-ebu kaadị akwụmụgwọ nanị iji zere inwe ọtụtụ ego n’akpa anyị — omume nke nwere ike ịdị ize ndụ, karịsịa mgbe anyị na-eme njem. Kaadị akwụmụgwọ na-enyere anyị aka ịkwụ ụgwọ maka ịzụrụ ihe anyị na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ n'otu oge, ịbụ ha mkpa ma ọ bụ ọmarịcha inwe. Omume mbụ ahụ bụ ụzọ dị mma iji akwụmụgwọ njem. N'ezie, thezọ kachasị mma iji nweta ụgwọ ọrụ na kaadị akwụmụgwọ njem gị bụ iji ya mgbe mgbe, karịsịa maka nnukwu ịzụrụ. Ma omume nke abụọ nwere ike ịdị ize ndụ mgbe ị na-eji kaadị akwụmụgwọ njem. Gịnị? n'ihi na, mgbe nkezi ọmụrụ nwa ụlọ ọrụ kaadị kredit gbara dum-ma ị nwere ike ịchọta ọtụtụ nke na-akwụ ụgwọ dị ala karịa-bụ 14.52%, ụfọdụ kaadị akwụmụgwọ njem na-akwụ ụgwọ elu 25%. Ọtụtụ na-akwụkwa ụgwọ dị arọ kwa afọ n’elu nke ahụ. Nweta nguzozi dị elu na kaadị akwụmụgwọ njem ga-ejide ụgwọ ebubo ọmụrụ nwa gị n'oge na-adịghị anya. Yabụ iwu izizi iji kaadị akwụmụgwọ njem agaghị akwụ gị ụgwọ karịa na ị nwere ike ịkwụ ụgwọ n'otu usoro ịgba ụgwọ.
2. Elele nke iji kaadi iji kredit njem
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka kaadị kredit na-achọsi ike ịnweta azụmahịa gị. Ha na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-asọ mpi iji nweta ya. Inye mmemme puru iche ma sie ike bu ugwo ahia bu uzo kachasi di iche na ndi ahia.
Perks na-agba ọsọ ahụ. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-akwụghachi gị ụgwọ ugboro ugboro. Ka anyị kwuo na ị bụ onye New Yorker na-eme atụmatụ njem uto nke Bordeaux, akụkụ nke mbụ nke njem gị bụ eleghị anya a ụgbọ elu na-Paris-nke yiri ka ọ bụ ndị kasị ibu otu mmefu nke njem gị. (Nke ahụ bụ belụsọ na ị na-anụ ụtọ mkpụrụ osisi vintages dị obere!) Ugboro ikuku nke ị na-enweta ga-azụtara gị tiketi ụgbọ elu ahụ. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka kaadị akwụmụgwọ na-agụnye tiketi tiketi kwa afọ dị ka akụkụ nke usoro ụgwọ ọrụ ha, ya mere i nwere ike iweta enyi tinyere na njem. Companieslọ ọrụ ndị ọzọ na-enye ụgwọ ọrụ nwere ike ime ka ụgbọ elu gị nwee obi ụtọ, site na klas mbụ na-akwalite iji nweta ohere ezumike ọdụ ụgbọelu na ọdụ ụgbọ elu ụwa. Ego na họtel na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na-aghọtakwa ụfọdụ njem kaadị akwụmụgwọ ’ụgwọ ọrụ Ọdịdị.
3. Olee otú Iji Mee A Train Adventure Ọbụna More mmefu ego-Enyi na Enyi: Nhọrọ anyị nke Perks
Perk kachasị agbanwe agbanwe ị nwere ike irite bụ cashback na nzụta gị. The kaadị akwụmụgwọ kacha mma kwuo ugwo 2% Laghachi azụ nzụta gị niile. Fọdụ na-amụba pasent cashback ha ka ihe ruru 6% na họrọ edemede, gụnyere njem ụgbọelu, na-eri nri, na ịzụrụ ihe na họtel. Ọ bụrụ na ị na-eji kaadị akwụmụgwọ njem gị oge niile-ọbụlagodi ịkwụ ụgwọ maka ihe ndị a na-eme kwa ụbọchị dị ka ihe oriri na gas - ụgwọ ọrụ ego nwere ike ịgbakwunye ngwa ngwa ma nwee ike ịkwụ ụgwọ mmefu njem ọ bụla masịrị gị, tinyere njem ụgbọ oloko gị ọzọ. Ma ọzọkwa, ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na iji kaadị akwụmụgwọ njem gị otu a ma ọ bụrụ na ị kwadebere ịkwụ ụgwọ nguzo gị kwa ọnwa.
4. Atụmatụ maka Chohọrọ A Travel Ebe E Si Nweta Kaadị
Kaadị kaadị njem na-ejikarị ụfọdụ ụdị usoro iji gbakọọ ụgwọ ọrụ ị na-enweta na sistemụ ndị a na-agbagwoju anya. Na mgbakwunye, ụfọdụ kaadị weta a kacha nta zuo chọrọ tupu i nwere ike irite ihe ọ bụla na niile. Ọmụmaatụ, Enwere ike ịgwa gị ka ịmee a $1000 ma ọ bụ karịa na ịzụrụ ihe karịrị ọnwa atọ tupu ịmalite ịmalite ego. Itinye ụgbọelu ụgbọ elu na kaadị akwụmụgwọ njem gị bụ ụzọ dị mfe iji zute opekempe. Ma ị nwekwara ike izute ya site na iji kaadị gị ọnwa ole na ole iji kwụọ ụgwọ maka mmefu kwa ụbọchị. Naanị jide n'aka na ịdebe ihe ịzụrụ iji hụ na ị nọ n'ụzọ kwa ọnwa iji ruo ebumnuche mmefu gị.
Betzọ ị kachasị mma bụ ịtụle kaadị ọ bụla ị na-atụle apụl na apụl. Nwere ike ịmepụta mpempe akwụkwọ maka ebumnuche a iji jide n'aka na ị na-ewepụta atụmatụ niile nke kaadị ọ bụla ma na-eme nyocha ziri ezi.. Gbalia itinye mmasi APR, opekempe zuo chọrọ, ego cashback, na ụgwọ kwa afọ kaadị gị na-akwụ ụgwọ na ngụkọta oge gị.
5. Olee otú Iji Mee A Train Adventure Ọbụna More mmefu ego-Enyi na Enyi: Ndụmọdụ Ikpeazụ
Wanderlust nwere ike bụrụ ihe na-enweghị ike igbochi ya. Dị ka ndị ọkachamara na-eme njem, anyị na-agba gị ume iji kredit mee ihe n’ụzọ kwesịrị ekwesị. Ọzọkwa, anyị na-arịọ gị ka ị tụlee ọrụ gị maka ụwa. Ime nhọrọ njem nke nwere obere mmetụta gburugburu ebe obibi, dị ka ejegharị ejegharị ụgbọ okporo ígwè kama iji ụgbọala ịchọpụta ebe ọzọ ị na-aga, bụ otu ụzọ isi mee njem mgbe ị na-eme ihe kwekọrọ n'ụkpụrụ nke nkwado.
ebe a na Save A Train, we will be happy to help you plan your vacation in Europe by train.
You chọrọ Embed anyị blog post “Olee otú Iji Mee A Train Adventure Ọbụna More mmefu ego-Enyi na Enyi” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/train-adventure-budget-friendly/ የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, you will find our most popular train routes – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / pl na / fr ma ọ bụ / de na ndị ọzọ asụsụ.